Ọ ga-ekwe omume n'ihi na Me-agbake WD My Passport Data?
Igosi WD My Passport Iweghachite na 3 Nzọụkwụ
1 Ọ Bụ kwe m omume na-agbake WD My Passport Data?
Ndewo, m nwere WD My Passport ike mbanye na m nwere ọtụtụ foto na ya. Taa, mgbe m ejikọrọ ya kọmputa m, m na kọmputa achọpụtara ọ ma m hụrụ ihe ọ bụla n'ime. Dị m nkụda mmụọ banyere nke a. Kedu ihe m nwere ike ịme? Bụ n'ebe ọ bụla software na pụrụ inyere m aka naghachi data si m WD My Passport HD ka m mkpa n'ezie ndị photos? Ezi echiche.
Naa WD My Passport HD ọzọ bụ na ihe na-ewu ewu n'ihi na nke obere atụmatụ. Ị nwere ike mfe etinye a dịgasị iche iche nke faịlụ na ya. Otú ọ dị, faịlụ dị ka mkpa akwụkwọ ma ọ bụ foto nwere ike furu efu ruru gị hiere ụzọ nhichapụ, formatted HD ma ọ bụ ọbụna usoro njehie na ị ga-eche na ike naghachi data si WD My Passport HD.
Dabara nke ọma, ị ka nwere ike mezuo WD My Passport data mgbake na a data mgbake usoro. Ebe i nwere ike na-agbalị Wondershare Data Recovery, ma ọ bụ Wondershare Data Recovery for Mac. Ọ na-eje ozi ma Windows na Mac ọrụ naghachi ehichapụ ọ bụ furu efu data si WD My Passport HD na ala.
Ị nwere ike ibudata ngwa ngwa, nchebe na a pụrụ ịdabere WD My Passport data mgbake si n'okpuru.
2 Igosi WD My Passport Iweghachite na 3 Nzọụkwụ
Nzọụkwụ 1 Họrọ Iweghachite ọnọdụ
Wụnye na-agba ọsọ usoro ihe omume, ị ga-enwe 5 mgbake ụdịdị ịhọrọ site na ya mmalite interface. Lee, m ike ikwu na ị na-eji "Echefuola File Iweghachite" mbụ, ọ bụ irè iji weghachite ehichapụ faịlụ site na gị WD My Passport HD. Ọ bụrụ na a mode adịghị aka, i nwere ike na-agbalị ọzọ nhọrọ.
Nzọụkwụ 2 iṅomi gị WD My Passport HD
Mgbe na-ahọpụta mgbake mode, ị ga na-rịọrọ ịhọrọ a nkebi ike iṅomi. Ebe a mkpa ka ị họrọ gị WD My Passport HD ebe ị ehichapụ ma ọ bụ furu efu gị faịlụ wee pịa "Malite iṅomi" ịchọ gị faịlụ.
Nzọụkwụ 3 Preview ehichapụ ma ọ bụ Lost Files na-azọpụta ha na gị Mac
Mgbe iṅomi dị n'elu, ị ga-ahụ ihe interface dị ka n'okpuru. Gị ehichapụ ọ bụ furu efu faịlụ na-depụtara na mbụ aha na ụzọ.
The ikpe mbipute-enye gị ohere ịhụchalụ nkọwa nke hụrụ faịlụ. Ị nwere ike ịlele ma ha bụ ndị faịlụ na ị chọrọ ma ọ bụ n'ụzọ dị mfe.
Ikpeazụ nzọụkwụ bụ ego faịlụ ị chọrọ iji naghachi na-azọpụta ha na Mac.
Ndetu: Iji mee ka mgbake ịga nke ọma, biko adịghị ịzọpụta natara faịlụ azụ gị WD My Passport ọzọ.
Atụmatụ nke Wondershare Data Recovery:
1. Nke a ọrụ enyi na enyi omume Recovers ehichapụ, Ị na-efu data gụnyere akwụkwọ, ihe oyiyi, videos, audio, ozi ịntanetị, na-edebe ihe ochie kpamkpam.
2. Ọ bụ n'ụzọ zuru ezu dakọtara na kọmputa, mpụga ike draịva na SD kaadị.
> Resource> Naghachi> Nzọụkwụ naghachi furu efu ma ọ ehichapụ faịlụ site WD My Passport Draịvụ